DHEGEYSO: Waayo ciddii ka dambeeysey dayuurad lagu rasaaseeyey Qansaxdheere | Hadalsame Media
Home Wararka DHEGEYSO: Waayo ciddii ka dambeeysey dayuurad lagu rasaaseeyey Qansaxdheere
(Qansaxdheere) 25 Maajo 2020 – Wararka ka imanaya Gobolka Bay ayaa sheegaya in diyaarad sidday sahay gargaar maanta lagu rasaaseeyey degaanka Qansaxdheere xilli ay doonayso inay halkaasi ku degto, sida ay VOA Somali ka heshay ilo-wareed kala duwan.
Diyaaradda ayay waxaa ku dhacay rasaas fudud, waxaana shilkan uu dhacay wax yar ka hor 12-kii duhurnimo, sida VOA ay ogaatay.
Diyaaradda ayaa Qansaxdheere gaysay gargaarka nafaqada leh oo loo waday dumarka iyo carruurta. Wararku waxay sheegayaan in diyaaraddu ay markii dambe kasoo kacday Qansaxdheere isla markaana ay kusoo laabatay Muqdisho.
Mid ka mid ah saraakisha Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa VOA u sheegay in loo malaynayo in Al-Shabaab ay rasaasta ku fureen diyaaradda.
Bishan horraanteedii ayey diyaarad ku dhacday Bardaale taasi oo ay ku dhinteen lix qof. Mas’uuliyiinta maamulka ayaa sheegay inay ciidamada Itoobiya rasaaseeyeen diyaaradda, waxaana haatan socda baaritaan.
Faah-faahinta ayaa weriyahayaga Haaruun Macruuf uu ka waraystay Cabdirusaq Cabdi Ibraahim oo ah guddoomiyaha Qansaxdhere.
Previous articleIlhaan Cumar oo Turkiga weerar ku qaadday (Arrimo is diidaya oo ay ku dhaqaaqday)
Next articleKenyatta oo markii uu dantiisa ka gaarey la kici raba Aadan Ducaale & xaalka oo ku cakiran!!